उपत्यकामा खुकुलो भयो निषेधाज्ञा : यातायात र पसलसँगै के खुल्यो ? के खुलेन ? - ePosttimes
Homeराष्ट्रियउपत्यकामा खुकुलो भयो निषेधाज्ञा : यातायात र पसलसँगै के खुल्यो ? के खुलेन ?
राष्ट्रिय, समाचार 0
भदौ-२४ , काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भोलि बिहीबारदेखि भने पसल व्यवसाय खुल्ने भएको छ भने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पनि चल्ने भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तीन हप्तासम्म लामो जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै नयाँ आदेश जारी गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा ४ भदौबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । सुरुको दुई साता कडा गरिएको निषेधाज्ञाको तेस्रो साता भने निश्चित समय तोकेर निर्माण सामाग्री ढुवानी तथा बिक्री वितरण खुला गरिएको थियो ।
उद्योगी व्यापारीले पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर व्यवसाय खोल्न नदिए अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्ने भन्दै निषेधाज्ञामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । –अनलाईनखबरबाट
हतुवागढीको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक योजना निर्माणमा ठेकदारको लापार्वाही, अन्य योजनाहरु भीडको चिण्डो यता न उति (posttimes) (4,110)
हतुवागढीका एक यूवकमा (पिसिआर) टेस्टबाट कोरोना सक्रमण भएको पुष्टी (posttimes) (3,475)